ကျွန်တော်တို့ဆီက အနုပညာသမား တော်တော်များများက ကြည့်လိုက်ရင် အပြုံးကိုယ်စီနဲ့ ရင်ထဲမှာတော? - Yangon Media Group
ကျွန်တော်တို့ဆီက အနုပညာသမား တော်တော်များများက ကြည့်လိုက်ရင် အပြုံးကိုယ်စီနဲ့ ရင်ထဲမှာတော?
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများရိုက်ကူး ရာတွင် ကိုယ့်အဖွဲ့နှင့်ကိုယ် အလုပ်လုပ်နေ ကြခြင်းမှာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ သရုပ်ဆောင် ရန်ကျော်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ”အခုက ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ အဖွဲ့နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေတာက မဟုတ်သေးဘူးလို့ ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်။ သူက တော့ ငါ့အဖွဲ့ကမဟုတ်လို့ ခေါ်မရိုက်ဘူး ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ ကာရိုက်တာ တစ်ခုက သူနဲ့ထိုက်တန်ရင် ကိုယ့်အဖွဲ့က ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်သုံးရမယ်လေ။ ကာ ရိုက်တာနဲ့ သူနဲ့က မကိုက်ညီပေမယ့်လည်း ငါ့လူပဲ သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီလူကိုပဲ ထည့်ရိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်ရုပ်က ဘယ် လိုက်တော့မလဲ။ ကာရိုက်တာက လိုက်ဖက်ညီတဲ့သူကိုသုံးတော့မှ သရုပ်ဆောင်မှပဲ ကြည့်တဲ့သူကလည်း ကြည့်လိုကောင်းတာ လေ”ဟု ၄င်းက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်၏ အရည်အချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့မရကြောင်းဟုလည်း ပြောပြခဲ့ ပြန်ပါတယ်။ ”သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းကို ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲ သရုပ်ဆောင်တာ ကိုကြိုးစားထားပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေလုပ် ထားပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြော ပရိသတ်လက်ခံမှ ဖြစ်တာလေ။ ပရိသတ်အဆုံးအဖြတ်က အ ရေးကြီးတယ်”ဟု သရုပ်ဆောင် ရန်ကျော်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဇာတ်ကားများကောင်းမွန်ရန် ကြိုးစားရာတွင်လည်း မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ ပံ့ပိုးမှုကိုမှ မမျှော်လင့်နေဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ပြော ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။
”မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာကားကို ကြည့်ချင်ကြမှာပဲလေ။ အဲဒီအခါကျတော့ ကိုယ်တွေရဲ့ဇာတ်ကားတွေက အဆင့်အတန်းမီဖို့တော့ လိုအပ်တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ပြောနေတာကလေ အနုပညာလောကမှာကျင်လည် နေတဲ့ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းရော၊ သရုပ်ဆောင် အပိုင်းရော၊ ဒါရိုက်တာအပိုင်းကိုရော တစ် ခုပြောချင်တာက ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံ တော်က ငါတို့ကိုတော့ မပံ့ပိုးဘူး ဆိုပြီးတော့ ထိုင်ပြီးပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံ ခြားကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ အားကျနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကြိုးစားစေချင်တာပါ”ဟု ဆိုပါတယ်။ ဇာတ်ကားများပရိသတ်လက်ခံရန်အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းတွင် အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ရှိရန်လိုအပ်တယ်လို့လည်း ပြောပြပါတယ်။ ”အခုနောက်ပိုင်းတော့ တောက်လျှောက်ဆိုသလို ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရော ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီးတွေကိုပါ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန် တော့်အတွက်ကျတော့ ငွေရေးကြေးရေးထက်ကို ကိုယ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတာမရတာကို ပဲကြည့်ပြီးတော့ရိုက်တယ်”ဟု သရုပ်ဆောင် ရန်ကျော်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
'ပရိသတ် အချစ်ကို ခံယူနေရတဲ့ အချိန်မှာ သတင်း အမှားတွေကြောင့် ဆဲနေကြတာတွေ ရှိတယ်' မေပန်းချီ
မွန်ပါတီသုံးခု ပေါင်းထားသော မွန်ပါတီသစ်၏ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ရီးရဲလ်မှ ထွက်ခွာလိုသည့် မာဆယ်လိုအား အာဆင်နယ် စိတ်ဝင်စား
ဟွန်ဘင်းနဲ့ ဆွန်ယယ်ဂျင်းတို့ရဲ့ ဒရာမာအသစ် tvN ရုပ်သံလိုင်းမှ မကြာမီပြသမည်
”မော်ဒယ်အလုပ်ကို ကြာလာလေလေ ပိုပြီးတော့ ကြိုက်လာလေပဲ” အွန်ဆိုင်း
ထိုင်းအလုပ်ရှင်ကို အပိုင်းပိုင်း ခုတ်သတ်၊ အလောင်းဖျောက်မှုဖြင့် မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးနှင်??